नेविसंघलाई नयाँ ढंगबाट अगाडि बढाउनु पर्छ | My News Nepal
रामप्रसाद अधिकारी, पूर्व प्रवक्ता तथा प्रचार विभाग प्रमुख – नेपाल विद्यार्थी संघ
चितवनको अरुणोदय माध्यामिक विद्यालयमा अध्ययनका क्रममा वि.सं. २०४६ सालबाट राजनीतिमा लाग्नु भएका रामप्रसाद अधिकारी यतिबेला नेपाल विद्यार्थी संघको केन्द्रिय नेता हुनुहुन्छ । झण्डै एक दशकदेखि नेविसंघको महाधिवेशन हुन नसक्दा युवा नेताहरुलाई मात्र होइन सिंगो नेपाली कांग्रेस र मुलुकलाई समेत असर परेको उहाँ बताउनु हुन्छ । अधिकारी वि.सं. २०५१ मा अमृत साइन्स क्याम्पसको इकाई सदस्य हुँदै उपसभापति, २०५६ मा इकाइ अध्यक्ष, २०५७ मा स्ववियूमा सभापतिको उम्मेदवार, २०५८ मा केन्द्रिय समितिको मुख्य सचिव हुँदै २०६४ मा आइपुग्दा केन्द्रिय सदस्य प्रवक्ता तथा प्रचार विभाग प्रमुख हुनुभएको थियो । त्यसपछि नेविसंघको महाधिवेशन हुन नसक्दा युवा नेताहरु अपाङ्ग जस्तो भएर बस्नु परेको उहाँको गुनासो छ । नेपाली कांग्रेसको नयाँ नेतृत्वले ६ महिनाभित्र भातृ संस्थाहरुको महाधिवेशन गराउने निर्णय गरेसँगै अधिकारी पनि आफू अध्यक्षको प्रत्यासी रुपमा अगाडि बढेको बताउनु हुन्छ । नेविसंघको महाधिवेशन, वर्तमान अवस्था, महाधिवेशन हुन नसक्दाका कठिनाइहरुलगायतका बारेमा अधिकारीसँग mynewsnepal.comका लागि कुमार भण्डारीले गरेको कुराकानीः
० झण्डै एक दशकसम्म पनि नेपाल विद्यार्थी संघको महाधिवेशन हुन सकिरहेको छैन, यसले युवा नेताहरुमा कत्तिको असर परिरहेको छ ? – महाधिवेशन हुन नसक्दा युवा नेताहरुलाई मात्र होइन, पूरै नेपाली कांग्रेस, प्रजातन्त्र र राष्ट्रलाई नै असर पारेको छ । अहिले मात्र होइन यसको असर अबको १० वर्षपछिसम्म पनि देखिने छ । नेविसंघ भनेको नेपाली कांग्रेसको नर्सरी नै हो । यदि नर्सरीमा नै आगो लाग्यो भने रुख ठूला हुन कहाँ पाउँछ र ? नेविसंघमा पनि यस्तै भएको छ । नर्सरीमा नै डढेलो लागेको छ । त्यसैले पनि अहिले मात्र होइन भविश्यमा समेत यसको असर देखिने छ ।
० अहिलेसम्म महाधिवेशन हुन नसक्नुको कारण के हो ? – नेतृत्वको इच्छा शक्ति नभएर नै नेविसंघको महाधिवेशन हुन नसकेको हो । यदि नेतृत्वको इच्छाशक्ति हुन्थ्यो भने समयमा नै नेविसंघ मात्र होइन सबै भातृ संगठनहरुको महाधिवेशन हुन्थ्यो ।
० नेपाली कांग्रेसको नयाँ नेतृत्वसँगै महाधिवेशनको चर्चा चलेको छ, के अब महाधिवेशन हुन्छ त ? – मैले अघि पनि भने नेतृत्वको इच्छा शक्ति नहुँदा महाधिवेशन हुन नसकेको हो । नयाँ नेतृत्वको पहिलो बैठकले ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्ने भनेर समयसमेत तोकिसकेको छ । मलाई लाग्छ नेताहरुमा इच्छाशक्ति जाग्यो भने महाधिवेशन हुन्छ । म के भन्छु भने नेविसंघको महाधिवेशन विधि सम्मत हुनुपर्छ । यहाँ त व्यक्तिवादी चरित्र हावी भए कै कारणले महाधिवेशन हुन नसकेको हो ।
० यसअघि जस्तै यस पटक पनि कसैलाई टिका लगाएर महाधिवेशनको समय दिने संभावना छ कि छैन ? – टिका लगाउने कुरा भनेको नेतृत्वको चाहना हो । यसअघि पनि त्यस्ता घटना नभएका होइनन् । यदि कसैले म नेविसंघको महाधिवेशन गराउन सक्छु भन्छ र नेतृत्वले पनि विश्वास गर्छ भने दिंदा फरक पर्दैन । तर, गर्न नसक्नेलाई चाहिं दिनु हुँदैन । पाँच पटक सम्म अधिवेशनको मिति तोकेर गर्न नसक्ने हो भने त्यसको कुनै औचित्य नै छैन । यदि कसैले ‘कमिटमेन्ट’ गर्छ र नेतृत्वले पनि स्वीकार गर्छ भने उसलाई दिंदा फरक पर्दैन । तर, मलाई वर्तमान नेतृत्वले नै महाधिवेशन गराउन सक्छ भन्ने विश्वास छैन । अब पनि नेविसंघलाई विधिसम्मत तरिकाले अगाडि नबढाउने र टिका लगाउने हो भने त्यसले नेविंसघप्रतिको विश्वासमा आघात पुग्नेछ ।
० तितरवितर भइसकेको नेविसंघमा अब पनि महाधिवेशन भएन भने के हुन्छ ? – अहिले भनेको हामी जस्ता युवा नेताहरुसँग पिडा पचाएर हिड्नु भन्दा अन्य विकल्प म देख्दिन । अधिवेशन हुन नसक्दा भविश्य नदेखेर कतिपय युवा नेताहरु विदेशिएका छन् भने कतिपयले नेविसंघलाई माया मारिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा पनि अझै महाधिवेशन हुन सकेन भने त त्यसले निम्त्याउने खतरा नेपाली कांग्रेसले पनि मूल्यांकन गर्न सक्दैन ।
० नेविसंघ केन्द्रिय समिति चाहिं यतिबेला के गरिरहेको छ ? – नेविसंघको केन्द्रिय समिति यतिबेला भूमिका विहिन भएको अवस्थामा छ । अध्यक्षज्यूले मात्र भूमिका पाउनु भएको छ । उहाँको काम भनेको यतिबेला पार्टीमा भ्रम सिर्जना गराउनु मात्र भएको जस्तो मैले पाएको छु । जिल्ला तथा क्याम्पसहरुमा भने युवा नेताहरु लागि रहेकै छन् । नेविसंघ केन्द्रले अझ भनौ हामीले होइन, क्याम्पस र जिल्लाका साथिहरुले बचाएको संस्था हो । केन्द्रिय नेतृत्व कमजोर हुँदा महाधिवेशन हुन सकेन जसले प्रजातान्त्रिक परिपाटिलाई कमजोर बनाएको छ ।
० नौ वर्षसम्म महाधिवेशन हुन नसक्दा तपाई जस्ता युवा नेताहरुले महाधिवेशन गराउनु पर्छ भनेर नेतृत्वलाई दबाब दिन सक्नु भएन ? – होइन, हामीले पटक–पटक महाधिवेशन गराउनुपर्छ भनेर नेतृत्वलाई दबाब दिएकै हौं । तत्कालिन सभापति सुशील कोइरालालाई मेरो नै नेतृत्वको टोलीले पटक–पटक भेटेर महाधिवेशनको लागि दबाब दिएको हो । उहाँले तत्कालिन महामन्त्री प्रकाशमान सिंह, नविन्द्रराज जोशीलगायतलाई जिम्मा दिनुभयो । तर, उहाँहरुले गंभिरताका साथ लिनु भएन । नत्र भने महाधिवेशन हुन नसक्ने कुनै पनि कारण नै थिएन ।
० महाधिवेशनको चर्चा चलेसँगै अध्यक्ष र महामन्त्रीमा धेरै आकांक्षीहरु देखिएका छन् नि ? – लोकतान्त्रिक परिपाटी र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यसलाई स्वभाविक प्रक्रिया मान्नुपर्छ । त्यसमाथि पनि लोकतान्त्रिक पार्टी कांग्रेसभित्र यसलाई नराम्रो मान्न सकिन्न । म भन्दा अग्रजहरु पनि नेविसंघमा हुनुहुन्छ, उहाँहरुले अध्यक्षको लागि दावी गर्न पाउनुहुन्छ । दावी सबैले गर्न पाउँछन्, तर, को सहि हो र को गलत भन्ने चाहिं छुट्याउन सक्नु पर्छ । लामो समयसम्म महाधिवेशन हुन नसक्दा नेविसंघ भित्र नेताहरुको जाम नै परेको छ भन्दा फरक नपर्ला । अब पार्टीले निकासका लागि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मैले देखेको छु । म भन्दा अग्रजहरुलाई पार्टीले कुनै पनि ठाउँमा व्यवस्थापन गर्ने हो भने नेविसंघको नेतृत्व लिन म तयार छु । तर, कामको मूल्यांकन गरेर नेतृत्व दिंदा उचित होला । यस विषयमा पार्टीले मध्यनजर गरेर सबैलाई राखेर सुझाव र सल्लाह लिएर अगाडि बढ्नु पर्छ ।
० तपाईलाई नै किन नेविसंघ अध्यक्ष बनाउने त ? – नेविसंघलाई नयाँ सोच र जाँगरका साथ जुझारु, प्रभाकारी, सशक्त र चुस्त दुरुस्त बनाएर अगाडि बढाउनका लागि मेरो नेतृत्व आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्छ । नेविसंघलाई अब फरक ढंगबाट सञ्चान गर्न आवश्यक छ । पहिले जस्तो परिवर्तनका लागि ढुंगा मुढा गर्ने, सडकमा टायर बालेर आन्दोलन गर्ने, नेपाल बन्द गर्ने भन्दा पनि लोकतन्त्र र गणतन्त्रसँगै नेविसंघ पनि नयाँ ढंगबाट अगाडि बढ्नु जरुरी छ । अब नेविसंघ पनि समाज परिवर्तनका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिंचाई, वेरोजगार, युवाहरुको समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर अगाडि बढ्नुपर्छ । यदि नेविसंघको नेतृत्व मैले लिए भने म नेविसंघलाई यि सबै प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउने प्रण गर्दछु । अब पनि नेविसंघलाई नयाँ शिराबाट अगाडि बढाउन सकिएन भने जसरी मुलुकमा धनी र गरिवबीचको खडाल विकराल बन्दै गएको छ, त्यसको दूरी अझै टाढा हुन पुग्छ । त्यसलै पनि मेरो नेतृत्वमा नेविसंघ शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी जस्ता समस्या समाधान र मुलुकको हितका लागि अगाडि बढ्नेछ । नेविसंघमा परिवर्तन ल्याउनका लागि नै म अध्यक्षको प्रत्यासिको रुपमा अगाडि बढेको हुँ ।
० तपाईलाई कसरी विश्वास गर्ने त ? – मलाई जसले नेविसंघको रामप्रसाद अधिकारी भनेर चिन्नुहुन्छ, उहाँहरुलाई पक्कै पनि थाहा हुनुपर्छ कि रामप्रसाद भाषणमा होइन काममा विश्वास गर्ने व्यक्ति हो । म के भन्छु भने मान्छे जहिले पनि कर्मयोगि बन्नुपर्छ । मैले नेविसंघको राजनीतिमा लागेदेखि नेविसंघका लागि धेरै पसिना बगाएको छु । कयौं पटक घाइते भएको छु । अप्ठेरा ठाउँमा साथिहरुलाई पठाएर आफू बच्ने प्रयास कहिल्यै गरिन । साथीहरुको सहयोग र सल्लाहमा नै म यहाँसम्म आइपुगेको हुँ । उहाँहरुको साथ, सहयोग र सल्लाह मेरो लागि जहिले पनि अपरिहार्य नै छ । मैले काम गरेर देखाएको छु । शिक्षामा समानतान हुनुपर्छ, स्वास्थ्य निशुल्क हुनुपर्छ भनेर हामीले माग गरेका थियौं । जस्तैः म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु । मेरो नेतृत्वमा नेविसंघले कालिकोटमा पढेको विद्यार्थी र लिटिल एन्जलल्समा पढेको विद्यार्थीको पढाइमा समानता हुनुपर्छ भनेर तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसमक्ष मागपत्र प्रस्तुत गरेका थियौं । उहाँले माग पूरा गर्छु भनेर आश्वासन पनि दिनुभयो तर, अझसम्म हुन सकेको भने छैन । यस्ता मागहरु प्रसस्त छन् । जसले नेपाली जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्छन् । त्यसलाई पूरा गराउन मेरो कार्यकालमा पहल हुने पनि विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।
० नेपाली कांग्रेसको नयाँ नेतृत्व अब कसरी अगाडि बढ्ला ? – पार्टीको नयाँ नेतृत्वसँग युवा नेताहरुमा समेत आशा पलाएको छ । मलाई लाग्छ अबको नेतृत्वले नेपाली कांग्रेसका युवा नेता, नेपाली जनता र मुलुकमा केहि न केही नयाँपन देखाउनेछ ।
० नेविसंका लागि लडिरहेका र अब नेविसंघमा लाग्न चाहने युवाहरुलाई के भन्नुहुन्छ ? – सबैभन्दा पहिले त युवाहरुले नेविसंघ भनेको प्रजातन्त्रको निमित्त अनवरत रुपमा लड्दै आएको नेपाली कांग्रेसको भातृ संस्था हो भन्ने बुझ्नु जरुरी छ । स्थापनाकाल देखि नै यसले विद्यार्थी तथा जनतको हक हितका लागि काम गर्दै आएको छ । नेविसंघ प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा विश्वास गर्ने विद्यार्थी संगठन हो । यसमा लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन्छ । नेविसंघमा सबैको मूल्यांकन हुन्छ । त्यसैले पनि युवाहरुलाई नेविसंघमा गोलबद्ध हुन आग्रह गर्दछु । लामो समयदेखि महाधिवेशन हुन नसेकेको भनेर मन खिन्न बनाइरहनु भएका नेविसंघका साथिहरुलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने नेविसंघलाई फरक सोच र दृष्टिकोणबाट अगाडि बढाउन, प्रजातान्त्रिक पद्धति तथा गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र संविधानको कार्यान्वयनका लागि हामी सबै एकजुट भएर अगाडि बढ्न सबैमा अपिल गर्दछु ।